Computer Operator | Thu Han Si Co.,Ltd ﻿
9.10.2019, Full time , Construction / Building
•	ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်၍အထူးကျွမ်းကျင်ရမည်။(Excel, Word, Power Point)
Work location No.(14), Zay Kabar 3rd Street, Mingalardone Township.
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ဌာနအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	HT/LT လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဌာနအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	HT/LT လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Computer Operator Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Thu Han Si Co.,Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Construction/Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon